के स्वमूत्रपान स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ? - Dhangadhi Khabar
सोमबार ०९, जेठ २०७९ २०:४६
के स्वमूत्रपान स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ?
एजेन्सी: हिन्दूहरूले गोमूत्र (गहुँत)लाई पवित्र मानेर प्रयोग गरेको त हामीले प्रत्यक्ष देखे/भोगेकै कुरा हो । तर, मानिसकै पिसाब पिउने कुरा मात्र गर्दा पनि अधिकांशलाई घिन लाग्न सक्छ । तर, कतिपय मानिसहरू स्वमूत्रपान गर्दा स्वस्थ भइने भन्दै त्यसको प्रयोग गर्दै आइरहेकै छन् ।
मङ्गलबार ०६, असोज २०७७ ०८:५८ मा प्रकाशित
#हिन्दू #गोमूत्र #गहुँत #मानिस #पिसाब पिउने #स्वमूत्रपान #स्वास्थ्य